I-Telegram ihlaziywa kwaye ikuvumela ukuba wabelane ngendawo yakho ngexesha langempela | Iindaba zeGajethi
NgeTelegram ngoku ungabelana ngendawo okuyo ngexesha lokwenyani kunye nabahlobo bakho. Kwaye ukuba inkqubo yemiyalezo kwangoko yemvelaphi yaseRussia izibeke njengenye indlela eyinyani nenamandla kwi-WhatsApp. Nangona ibonelela ngenani lezinto ezibalulekileyo ezibonakala ngcono kunokhuphiswano, iseyinkonzo yomthunywa oshiyekileyo.
Nangona kunjalo, njengomthandi olungileyo wetekhnoloji oyiyo, siyazi ukuba iTelegram ayinakuphoswa kwi-smartphone okanye kwi-PC yakho esemsebenzini. Ewe ukusebenza kweTelegram okungagungqiyo kuyafika esiza kwamkela sonke kodwa ngelishwa abayi kwenza catapult isicelo kwindawo efanelekileyo.
La ngamanqaku athi uhlaziyo lweTelegram lwe-iOS lusishiya, indawo yokuqala apho luqhubekeke lwenza lo msebenzi mtsha, sicinga ukuba ngokuhamba kweentsuku iya kuthi ekugqibeleni ifikelele kwiVenkile yokuDlala kuGoogle.
- Yabelana ngendawo okuyo nabahlobo ngexesha lokwenyani kunye neendawo ezintsha zokuhlala.
-Umamele iifayile zeaudiyo kamnandi usebenzisa isidlali esilungelelanisiweyo (jonga ii-@cctracks ukuzama).
-Lawula ukuba amalungu amatsha kumaqela amakhulu angayibona na imiyalezo yembali yangaphambili.
-Yazi ngokulula imiyalezo evela kubaphathi beqela nebheji entsha "yolawulo".
-Izilungiso ezininzi ze-bug ze-iOS 11.
Ngamafutshane, I-Telegraph iyaqhubeka nokukhula ngaphandle kwento yokuba abasebenzisi kunye ne-manias zabo ezinezicelo ze-Facebook (njengeWhatsApp) akukho nto bayifunayo ngaphandle kokuyingcwaba. Ngendlela efanayo, iTelegram sisicelo esenziwe ngcono ngakumbi ngokuzinza kunye nokusetyenziswa kwebhetri ekuphakameni kwinqanaba eliphezulu leefowuni. Siza kuvavanya lo msebenzi mtsha ngelixa uqhubeka nokukhupha iinguqulelo ezintsha kwiVenkile yeApp ye-iOS kunye negama layo le-Android LAPHA.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ukuhlaziywa kweTelegram kwaye ikuvumela ukuba wabelane ngendawo yakho ngexesha lokwenyani
I-BlackBerry Motion, i-terminal enebhetri enkulu kunye nokungena manzi